Nhau - 3LTEX kambani yatora chikamu muTechtextile-Inotungamira yepasirese kutengeserana kurongeka kwehunyanzvi machira uye asina kusukwa
3LTEX kambani yakapinda muTechtextile-Inotungamira yepasirese kutengeserana kurongeka kwehunyanzvi machira uye nonwovens
Gore rega rega, iyo 3ltex kambani inotora chikamu mukuratidzira kweChina nekuratidzira kwepasirese zvine chekuita ne techtextils, kuchengetedzeka uye hutano.
Techtextil inotungamira yepasirese kutengeserana kurongeka kwehunyanzvi machira uye easina kuruka, icharatidza iyo yakazara spectrum yehunyanzvi machira, anoshanda mbatya dzemachira uye emachira matekinoroji kuTechtextil. SmartTextiles - kana zvishandiso zvine hungwaru - zviri kutora nyika yemachira nemhepo nevatungamiriri vemaindasitiri vakaita 3L kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinogona kugadzirisa indasitiri.
Iyo dumba re3Ltex (iyo yazvino dhizaini uye inogadzira techtextiles) yakaratidza China maitiro muhunyanzvi machira indasitiri.Dzidza zvakawanda nezve 3ltex yekambani yakangwara shinda, machira uye zvimwe zvigadzirwa pano.
3LTEX yakanyatsogadzirirwa, ine yakasimba chigadzirwa kuvandudza kugona uye yakanakisa tekinoroji zviyero, edu epamusoro-mashandiro akangwara machira uye machira akangwara ave zvakare ave anoonekera muindasitiri.
Dhizaini ine hunyanzvi uye musanganiswa wemabasa ekudzivirira moto, kupisa kwakanyanya kupisa, kupisa conduction, kuitisa kwemagetsi, antibacterial uye antistatic kwakwezva vazhinji vanogona kuve vatengi kumira, kutarisa uye kutaurirana.
Vazhinji vatengi vakaunza matambudziko ehunyanzvi akasangana panguva yekugadzirisa. Mushure mekutungamira kwehunyanzvi uye maitiro ekugadzirisa enjiniya emhando yepamusoro ye3LTEX, vatengi vazhinji vanogutsikana uye chinangwa chekutenga chinosvika ipapo.
Uyu mutambo weindasitiri, asiwo rwendo rwekukohwa. Paratidziro iyi, takadzosa mirairo yakawanda uye yakakosha maonero kubva kuvashandisi vekupedzisira uye shamwari dzevatengesi.
Mumakore achangopfuura, 3LTEX yakawana yakatwasuka uye yakatwasuka kuvandudza mune yakapusa yarn uye yakangwara machira maindasitiri, ine yakatanhamara budiriro, imwe mhando yekuunganidza uye kugadzikana kusimudzira.
Tiine musika wakanaka mashandiro kugona, isu tatove takatora chinzvimbo chakakosha mumunda wema smart yarns nemachira akachenjera.
Kunyange zvakadaro, tinoziva kuti "kune nzira refu yekufamba."
Tichaenderera mberi nekuvandudza manejimendi manejimendi, kumhanyisa maitiro e3L kuvaka chivakwa, zvine musoro kutarisana nemusika kudiwa, uye kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kushandira ruzhinji rwevashandisi neshamwari.
Post nguva: Jun-03-2019